5 osisi kpọgidere ka ịgbakwunye agba na windo na balconies | Bezzia
Osisi 5 kwụgidere iji gbakwunye agba na windo na mbara ihu
Maria onyekwere | 14/06/2022 12:00 | Home
Tinye osisi ndị kpọgidere na windo Ọ na-agbanwe kpamkpam facades. Ọ na-eweta agba na ọṅụ ma mee ka ha mara mma karị. Ha na-achọ ụfọdụ nraranye, ma ònye na-adịghị enwe mmasị ịtụgharị uche na mbara ihu ndị ahụ jupụtara n'okooko osisi mgbe ha na-emegharị ọdịdị ala anyị n'oge a n'afọ?
Enwere ọtụtụ osisi nke anyị nwere ike iji mee ka ìhè mbara ihu anyị site na mmiri ruo ọdịda. Agbanyeghị, n'etiti osisi na-adọba ara anyị hụrụ ụfọdụ ọkacha mmasị anyị. Osisi nwere okooko osisi na agba na-egbuke egbuke nke chọrọ nlekọta dị iche iche.
Surfinia bụ ahịhịa a na-ahụkarị n'èzí n'ihi ịkọ ya dị mfe. Ha sitere na ezinụlọ Solanaceae sitere na South America ma bụrụ otu n'ime ụdị petunias kacha sie ike. Àmụmà maka nkwudo ha ugbu a opi yiri okooko osisi nke nwere ike inwe agba dị iche iche yana ma akụkụ dị larịị na nke na-efegharị efegharị.
Nke a na osisi na-etolite na clumps na bụ dị mma maka na-eto eto na ite na osisi. N'ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ọ ka mma itinye ha na ndò ọkara, na-emesi ha obi ike na ọ dịkarịa ala awa isii nke anyanwụ n'ụbọchị, ọkacha mma n'ụtụtụ. Ọ dị mma mgbe ị na-akụ ha ka ịgbakwunye fatịlaịza na-ahapụ ngwa ngwa maka osisi ifuru na mkpụrụ na July, mgbe okooko mbụ ha gachara, na-akụ mkpụrụ osisi kacha ogologo (ihe karịrị 20%) iji nọgide na-enwe ọdịdị ha.
Calibrachoa bụ mkpụrụ osisi perennial otu ezinụlọ dị ka surfinia nke na-emepụta, site na mmiri ruo n'oge okpomọkụ, obere okooko osisi nwere mgbịrịgba. Omume uto ya na-akpụ akpụ, ya mere alaka ya na ifuru ya ga-ekokwasị ma ọ bụrụ na a kụrụ ya n'ite ma ọ bụ nkata n'ogo.
Calibrachoa bụ osisi nke ịdị elu ya anaghị agafe 20 cm. ifuru ya dị obere mana okooko ya bara ụba na nke ukwuu ma ọ bụrụ na ọ na-enweta awa dị mkpa nke anyanwụ. Dị ka surfinias, ihe kachasị mma bụ ịnata anyanwụ a n'ụtụtụ ma nọrọ na ndò ọkara n'isi ụtụtụ.
Nye ha ezigbo mmiri mmiri; Ma ngafe ahụ ma enweghị mmiri nwere ike imerụ ahụ. Y kụchie ị ga pIji nweta ọtụtụ kọmpat bushes na nnukwu ifuru. N'ime ọtụtụ ụdị, 'Million Bells' Calibrachoas bụ otu n'ime okooko osisi kacha ukwuu.
Geranium ivy ma ọ bụ gitanilla bụ otu n'ime ụdị kachasị ewu ewu maka agba windo na mbara ihu. Ọ bụ osisi na -eguzogide ọgwụ, nke na-ejigide okooko ya ruo oge oyi ma ọ bụrụ na e nyere ya awa zuru ezu nke ìhè anyanwụ kpọmkwem. Enwere ike itinye ha na anwụ zuru oke mana ọ nwere ike ịdị mma ime ya na ndò ọkara. Ha na-eguzogide okpomọkụ ruo 30º mana ọ bụghị okpomọkụ n'okpuru 5 degrees na-enweghị nchebe.
N'oge opupu ihe ubi na ọkọchị, ị kwesịrị ị na-agba geraniums mmiri ugboro ugboro, na-akpachara anya na ịkwa mmiri. N'ime oge a, na mgbakwunye, ọ ga-adaba adaba itinye ụfọdụ fatịlaịza maka okooko osisi ụbọchị iri ọ bụla.
Window gị ọ na-enweta awa ole na ole nke anwụ? Fuchsias bụ otu n'ime osisi ndị nwere okooko osisi ole na ole ị nwere ike tinye n'ime ite na na ndò. Ha ga-achọ, ee, awa ole na ole nke anyanwụ ga-eme nke ọma. Atọ nwere ike ezuru. Fuchsias na-akwadokwa ntu oyi. Mgbe oyi batara, ha ga-atụfu akwụkwọ na ifuru, mana ha ga-apụta ọzọ na mmiri.
Ụfọdụ ụdị fuchsias na-agba ohia ma na-eto eto, mana ị ga-ahụkwa ndị ọzọ ka ha kwụgidere. Mkpụrụ nke a na-akụ ya ga-adị ntakịrị acidic na porous iji mee ka mmiri na-asọpụta. N'ihe banyere ogbugba mmiri n'ubi, nke a ga-adị ukwuu n'oge oge okooko, nke mere na ala na-anọ ooh (ọ bụghị mmiri juru).
aphtemia bụ a na-akpụ akpụ succulent na mmepe ngwa ngwa sitere na Africa. Akwụkwọ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na anụ ahụ na inflorescences ya na-abụkarị pink, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịchọta ụdị uhie ma ọ bụ ọcha. Ọ na-amụba ngwa ngwa; naanị bee otu osisi ma rapara ya ozugbo n'ime ala.
Ọ bụ osisi na-achọ nnukwu ọkụ, n'agbanyeghị na ọ na-anabata ebe ndị nwere obere ndò. idi unwu ahu; ọ bụ ezie na ọ ga-ama ifuru nke ọma na mmiri na-aba ụba na mgbe niile ma ọ bụrụ na a na-enye ya ezigbo drainage. Ọ naghị akwado ntu oyi na-aga n'ihu, mana ọ nwere ike iguzogide okpomọkụ ruo -5ºC. Ọ ga-ezuru iji chebe ya na ebe oyi na-ekpo ọkụ na mkpuchi okpomọkụ n'oge oyi iji nụ ụtọ ya ọzọ na mmiri.
Kedu otu n'ime osisi ndị a kwụgidere na-amasị gị iji chọọ mbara ihu gị mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Osisi 5 kwụgidere iji gbakwunye agba na windo na mbara ihu
Netflix's Top Series: 'Nne zuru oke'
Sobada ọdịnala sitere na La Rioja